Navy Blue Bedroom Eyelet Thermal qol dahaaran Daahyada daahyada, Shiinaha Navy Blue Bedroom Eyelet Thermal dahaaran Qolka Madoobaadka daah-saareyaasha, shirkado, Warshad - Zhejiang Rancho Santa Fe home textile Co., Ltd
Number Model: Navy
QIIMEYNTA BADAN & SHAQADA PREMIUN - .Dhaxgalka laftiisa ayaa ka mid ah waxyaabaha ugu caansan adduunka. Muuqaalka xarrago leh, waxay ku siinaysaa jawi raaxo leh oo raaxo leh qolka. Maaddadu waa 100% polyester, waxay caqabad ku noqon kartaa 85% -93% light iyo UV ray. Waxay ku siin kartaa jawi deggan qolka isla markaana waxay abuuri kartaa jawi hurdo oo hagaagsan oo leh daahyadan mugdiga leh ee shaqeynaya.
Waxaa laga soo qaatay 100% tayo sare leh oo dhar jilicsan oo Super Soft ah (Polyester, la keenay). Daaha madow ee qalinka qalinku waa mid waara oo raaxo leh in la taabto. Ka jooji 85-95% ileyska qorraxda iyo shucaaca UV (Midabka Madoow wuxuu u shaqeeyaa si ka fiican) iyada oo aan wax dahaadh ah ku xirneyn mahadnaqa tiknoolajiyada saddex-geesoodka ah. Hooska iftiinka & yareynta buuqa asturnaanta iyo hurdada aan qasnayn. Hoos u dhig sawaxanka markii aad la joogto xubnaha qoyska, daahyada ayaa siinaya boos shaqsiyeed waxayna ilaalin doonaan asturnaanta